Drafitra 4 ho an'ny tolakandro sy alina fahavaratra | Bezzia
Drafitra 4 ho an'ny tolakandro sy alina fahavaratra
Tonga eto ihany ny toetr'andro tsara, fotoana tokony hitrandrahana ny fahavaratra. Ahoana? Ankafizo ireo drafitra hitantsika fa manintona amin'ny orinasa tsara indrindra. Satria na dia mbola tsy mitaky fahamalinana aza ny valanaretina, dia misy drafitra marobe mandany ny fahavaratra tolakandro sy alina tsy mandefitra.
Tianao ve ny mozika mivantana? Tianao ve ny kanto? Inona no tianao indrindra dia ny mankafy miala sasatra eny ivelany sy miaraka amin'ny orinasa tsara? Manana drafitra ho an'ny rehetra izahay. Efatra manokana izay mety amin'ny mankafy amin'ny mpivady na miaraka amin'ny namana tsy mandeha lavitra ny tanàna.
1 Art sy ny sakafo hariva handeha
2 Sakafo hariva sy cocktail
3 Mozika mivantana
4 Fialan-tsasatra mankany amin'ny ambanivohitra sy ny hotely alina
Art sy ny sakafo hariva handeha
Ny tolakandron'ny zavakanto dia safidy tsara hatrizay mba hankafizanao ny tolakandro fahavaratra. Zahao ny fandaharam-potoanan'ny tanànanao ary mifidiana fampirantiana zavakanto mahaliana anao. Vidio amin'ny Internet ny tapakilao ary ankafizo tsy maimaika, araraoty ny fividianana ny rivotra any amin'ny efitrano fampirantiana na ny tranombakoka izay manofana ny sorompanavotana. Amin'ny tolakandro fahavaratra mafana indrindra, misy drafitra tsara kokoa ve?
Rehefa lasa ianao dia mankanesa any an-toerana iray ao an-tanànanao izay manomana fandraisana. Safidio ilay resahin'ny tsirairay na ilay iray izay efa novakianao hevitra tsara momba azy ary mbola tsy nanandrana nanandrana ianao. Safidio izay tianao indrindra amin'ny menioo ary omeo kaonty tsara momba izany ny vaovao ao amin'ny lavarangana na terras. Taorian'ny tolakandro mahery tao amin'ny tranombakoka, tsy misy tsara noho ny mahazo aina sy mankafy orinasa tsara ao an-trano, tsy ekenao ve izany?
Sakafo hariva sy cocktail
Sakafo hariva aloha eo amin'ny terasin'ny trano fisakafoanana na hotely Toa drafitra tsara ho an'ny tolakandro fahavaratra iny. Ny toerana tapas dia mety ho toerana mety amin'ny tolakandro miaraka amin'ny namanao, fa mety aleonao zavatra akaiky kokoa raha tianao ny mifaly amin'ny alina ho mpivady.
Avy eo mandeha amin'ny toerana misy a menio cocktail be dia be manalava ny alina. Hanana fotoana tsy hay hadinoina ianao. Raha tsy izany, raha atambatra ny vanin-taona mafana, ny orinasa tsara ary ny cocktails sonia. Tsy fantatrao ve ny toerana toy izany? Ataovy miasa ny Google na anontanio ny namanao.
Amin'ity taona ity dia tsy afaka hankalazana ireo festival lehibe, fa raha ny hafa akaiky kokoa noho ny amin'ireo tanàna lehibe dia mamela antsika hankafy mozika mivantana. Ny Fetiben'ny Jardins Pedralbes sy ny Botanical Nights, any Barcelona sy Madrid, izy ireo dia anisan'ny malaza indrindra. Fa misy ny hafa toa an'i Las Nights del Río Babel na Weekend Beach Festival izay manome programa mozika tena mahaliana ihany koa ary mifanaraka amin'ny vanim-potoana vaovao, mifanaraka amin'ny fepetra fiarovana rehetra ilaina.
Fialan-tsasatra mankany amin'ny ambanivohitra sy ny hotely alina
Te hiala amin'ny tanàna lehibe ve ianao? Manakaiky ny tanànantsika manokana dia matetika misy toerana maro izay tsy fantatsika. Tsy maniry fotoana tsara hijerena azy ireo ve ianao? Raiso ny fiara ary mandosira mankany amin'ny faritra ambanivohitra akaiky ahafahanao miaina rivotra madio sy mandany tolakandro miala sasatra mandehandeha. Te hanana zavatra manokana manokana kokoa ve ianao? Mety misy orinasa any amin'ny faritra izay mandrindra bisikileta, mitaingina soavaly na lakana, zahao!
Mba hamita ny zavatra niainana manofa alina any amin'ny hotely ambanivohitra avy any amin'ny faritra ary ankafizo ny fahanginana izay sarotra be ny mahita mandritra ny fahavaratra any amin'ireo tanàna. Hifoha toy ny vaovao ianao ary aorian'ny sakafo maraina tsara dia azonao atao ny misafidy na miverina any an-tanàna ianao na manenjika bebe kokoa ny zavatra niainanao tany amin'ilay toerana nofidinao.
Ireo dia hevitra efatra fotsiny ho an'ny takariva fahavaratra sy alina, saingy misy maro hafa! Amin'ny tanàna tsirairay dia azonao atao koa izany ampanjifaina ny drafitrao araka ny hetsika natao. Raiso ny fandaharam-potoanan'ny tanànanao; Ho gaga ianao amin'ny tolo-kevitra fialam-boly rehetra misy ary tsy fantatrao.
Tianao ve ity karazana tolo-kevitra ity? Tsy ho ela dia hiezaka izahay hanome anao hevitra vitsivitsy mifantoka amin'ny ankizy kely.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » Ocio » Drafitra 4 ho an'ny tolakandro sy alina fahavaratra
Kitapo borosy makiazy: ho an'ny inona ny tsirairay?
Fanalahidy iasan'ny mpivady